Shina Fototra mandeha ho azy iray servo maotera servo maotera orinasa mpanamboatra sy mpanamboatra | Sanying
Ny masinina manontolo dia mivondrona amina rafitra ara-materialy, famolavolana, fantsom-bozaka, fametahana lasitra ary faritra hafa.
Ny masinina mandeha ho azy dia tsy afaka mamokatra sarontava tarehy azo esorina fotsiny fa tsy saron-tava N95 sy stereo.
Na ara-pitsaboana ilay maska ​​na tsia dia tsy misy ifandraisany amin'ilay masinina. Raha mbola voadio ny maska ​​dia azo ampiasaina amin'ny sarontava fandidiana ilay sarontava novokarin'ity fitaovana ity.
Famaritana momba ny masinina fiarovan-tava fiaramanidina hafainganam-pandeha iray: fampitaovana akora → fantsom-baravarana orona → famolavolana saron-tava → famolavolana modely manodidina ny saron-tava (azo ampidirina amin'ity toerana ity ny loogan'ny mpanjifa) → mpampita fehikibo sofina amin'ny famokarana sombin-tsarimihetsika → iray -fotoana fantsom-pandrefesana teboka efatra → saron-tava vita vita → fandefasana vokatra vita araka ny habetsany.
Ny fizotran'ny masinina misaron-tava dia fehezin'ny PLC ary entin'ny motera servo. Manana fampisehoana marin-toerana sy fiasa tsotra izy io!
1. Tsara ny vokan'ny welding ary ambany ny tahan'ny tsy fahombiazana;
2. Ny haingam-pamokarana dia mahomby, miaraka amin'ny takelaka 80-100 isa-minitra, izay azo hamokarana maharitra mandritra ny 24 ora;
3. Fanaraha-maso programa PLC, servo drive, automatique avo lenta;
4. Fifaneraserana amina milina malala-namana, fitaovana tsy ara-dalàna ary fanairana tsy fahampiana, fitarihana ny efijery hiatrehana haingana ny tsy ara-dalàna.
Anaran'ny vokatra: milina saron-tava fiaramanidina hafainganam-pandeha iray hafa
Famaritana fitaovana: 3600 (L) x3500 (W) X2000 (H) (mm)
Volta miasa: AC 220 V 12 A
Famaritana maska ​​azo ampiharina: saron-tava tsy misy tenona 2 / 3/4 / 5-layer
Saron'ny sarontava: 95x175 mm
Fahombiazan'ny famokarana: 80 ~ 100 / min / (asa mitohy mandritra ny 24 ora)
Previous: Function sy toetra mampiavaka ny masinina saron-trondro
Masinina saron-tava iray Drag Drag, Lamba matevina manohitra ny statika, Kitapo bubble fonosana, Mpanamboatra sarontava, Lamba mena, Masinina saron-tarehy,